हेमराजको नयाँ फिल्ममा आशिरमान र आना, अनमोल किन खेलेनन् ? « Mazzako Online
हेमराजको नयाँ फिल्ममा आशिरमान र आना, अनमोल किन खेलेनन् ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा छोटो समयमा नै स्थापित भएका निर्देशक हुन् हेमराज वीसी । उनले बनाएका फिल्म हिट छन्, यसैले उनी पनि हिट । उनै हेमराजले अब नयाँ फिल्म ‘ग्याङस्टार ब्लूज’ बनाउने भएका छन् । यो फिल्मको छायांकन माघ महिनाबाट सुरु हुनेछ ।
तर, फिल्म बनाउने औपचारिक जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरेर आज दिइयो । सरोज न्यौपानेको निर्माणमा तयार हुने फिल्ममा आशिरमान श्रेष्ठ जोशी, आना शर्मा, गौरव पहारी मुख्य भूमिकामा रहनेछन् । फिल्म ग्याङस्टार बन्न चाहनेहरुको कथामा तयार हुनेछ ।
कलाकारले कथा अनुसार लामो समय वर्कशप र होमवर्क गर्नुपर्ने भएकाले पनि चाडो घोषणा गरिएको जानकारी हेमराजले दिए । फिल्मको छायांकन तराई क्षेत्रमा गरिनेछ । यो फिल्ममा अभिनेता अनमोल केसीले अभिनय गर्ने चर्चा थियो । तर, अनमोलको डेट समस्याका कारण यो फिल्ममा उनी हुन सकेनन् ।